I-Black Rhino Game Lodge - Indawo yokuhlala
Indawo yokuhlala e-Black Rhino Game Lodge
I-Black Rhino Game Lodge ibonisa ukuthi ukuhlala ehlathini kungenziwa ngaphandle kokunikela nganoma iyiphi induduzo. Ama-suite angu-14 atholakalayo afakwe ngesikhala, umoya-moya kanye ne-patio yangasese ngokubuka ngokugcwele isihlahla esisezingeni eliphansi.
Izinketho zokuhlala ezithengekayo azilahleki noma yisiphi isitayela noma induduzo njengoba i-suite ngayinye ifakwe izidingo ezinjengeyunithi yesiphuzo eshisayo, indlu yokulala yokunethezeka kanye nethelevishini. Izivakashi zithathwa nge-patios ezingaphezu kwe-bushveld ne-air conditioning.
Kukhona ama-Double Suites, ama-Twin Suites ayisishiyagalombili kanye ne-Suites Suites ezine. I-Suites Suites ihlala ekamu le-satellites elikude ukusuka ku-Main Lodge. Ikamu lihlanganyela echibini lokubhukuda kanye nendawo yokulala ye-TV yomphakathi.
Buyisela Emuva - Umbono jikeleleDlulisa - Isabelo